विप्लवका छोराको बाईक काण्ड : म्युजियममा राखेको बाइक चढेको फोटो कसले गर्दै छ भाइरल ? «
विप्लवका छोराको बाईक काण्ड : म्युजियममा राखेको बाइक चढेको फोटो कसले गर्दै छ भाइरल ?
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १३:४४
पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच दुरी बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि हालसम्म ५ जना विप्लव कार्यकर्ताको मृत्यु भइसकेको छ ।
के त्यसो भए प्लेन चड्नेहरुले सेल्फी लिएर फोटो अपलोड गर्छन, प्लेन उनिहरुको आफ्नै निजि हो त ? उनले यो बाइक कुदाएको कसैले देखेको छ त ??’ इहुलाकीबाट